क्यान्सरलगायत १४८ प्रकारका रोगको औषधि गाईको गहुँत ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
क्यान्सरलगायत १४८ प्रकारका रोगको औषधि गाईको गहुँत ! जानी राखौ
Published :6November, 2018 8:41 pm
स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ । स्थानीय गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टेरोल रगतमा हुने बोसोले सन्तुलन गराउनुका साथै मुटुरोगका लागिसमेत लाभदायक हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
“के बाघ र डाँफे कसैले खाँदैनन् र रु अनि खागकै लागि कति गैँडाको हत्या गरिन्छ, के अब यी सब हुन दिइरहने रु” –उहाँ जोेड दिनुहुन्छ । गोरखनाथ र पशुपतिनाथको देशमा गाई एउटा राष्ट्रिय धरोहरका रुपमा रहँदै आएको छ । धेरै गाई पालेकैले शिवजीलाई पशुका पति अर्थात् पशुपति भनिन्छ । यसैकारण शिवजीको बाहन नै साँढे अर्थात् गोरु रहन गएको र धेरै गाईको रक्षा गरेकाले गोरक्षनाथबाट अपभ्रंश भई गोरखनाथ हुन गाएको बताइन्छ
स्थानीय गाईको पञ्चगव्य दूध, दही, घिउ, गहुँत र गोबर का माध्यमबाट हुने चिकित्साको तुलना विश्वका कुनै पनि चिकित्सा प्रणालीसित हुन नसक्ने वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाटै प्रमाणित भएको छ । यस चिकित्साले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बाथ, दम, युरिक एसिड, चर्म रोग र अर्थराइटिस जस्ता रोगमा समेत लाभ हुन्छ ।
पञ्चगव्य चिकित्साको दक्षिण भारतको चेन्नईमा प्राज्ञिक अध्ययन अध्यापन हुने तर अन्यत्र भने प्रशिक्षण मात्र दिने गरिएको छ । नेपालमा अध्ययन अध्यापन त परै जावस् अहिलेसम्म प्रशिक्षण समेत भएको छैन । पञ्चगव्य चिकित्साको उपचार भने काठमाडौँस्थित नयाँसडकमा रहेको कल्याण आयुर्वेद केन्द्रमा शुरु भएको छ । भारतबाटै अध्ययन गरी आएकाले अहिले यस केन्द्रमा पञ्चगव्य चिकित्साबाट उपचार गरिरहेको केन्द्रका सञ्चालक महेश मोदी बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पेटका साथैं छातिको समस्या भएका मानिसहरुको सख्या बढ्दैं गइरहेको छ । अहिले
ग्यास्ट्रिकका उपचार अब आफैँ गर्न सकिने, एस्ता छन् घरेलु उपचार विधि ! जानी राखौं
पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्यालाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई
नङको काम हात-खुट्टाका औलाको सौन्दर्य बढाऊने मात्र होइन । यसले शरीरभित्र लुकेर रहेका बिभिन्न रोगबारे
सर्पले टोकेमा तत्काल के गर्ने ? कसरी घरमै अपनाउन सकिन्छ प्राथमिक उपचार, समयमै उपाचार नभए ज्यानै जान सक्छ ! जानी राखौ
सर्प भन्ने बत्तिकै हामि झसँग हुन्छौ ।हामि झसँग हुनु पनि स्वभाबिक नै हो । किनकी
बिहानै मुक्तिनाथको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप